FOMBA HAHITANAO NY TOETRAN'NY SOLOSAINAO - WINDOWS - 2019
Fomba hahitanao ny toetran'ny solosainao
Amin'ny toe-javatra sasany, ireo mpampiasa ao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte dia mety mila manafina ny sarin'izy ireo manokana. Na inona na inona anton'ilay fanarona, ny administratiora VK.com dia efa nanome ny zavatra ilaina ho an'ity tanjona ity ho an'ny mpampiasa tsirairay.
Alohan'ny hanombohanao ny dingana famaranana ny sarimihetsika, dia manolo-kevitra ny manapa-kevitra ny laharam-pahamehana, satria amin'ny tranga sasany dia mora kokoa ny mamafa sary. Raha mbola mila manakatona ny sary avy amin'ny mpampiasa iray ianao dia araho ny toromarika etsy ambany, arakaraka ny toe-javatra misy anao.
Afeno ny sary VKontakte
Voalohany indrindra, zava-dehibe ny hahatakatra fa maro ny tranga raha mila manafina ny sarinao ianao ary ny vahaolana amin'ny olana tsirairay dia mitaky fandinihana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny olana rehetra misy ny sary VKontakte dia vahaolana amin'ny fanesorana azy ireo.
Eo am-panafina ny sarinao, tadidio fa amin'ny tranga sasany dia tsy azo havaozina ny fihetsika.
Ireto torolàlana manaraka ireto dia mamela anao mora foana hamaha ny olana amin'ny famelana sary ao amin'ny pejin'ny tena manokana, arakaraka ny zavatra tianao hotratrarina.
Afeno ny sary eo amin'ny pejy manokana
Araka ny fantatrao, ao amin'ny pejy manokana an'ny mpisera VK dia misy ny sarin'ireo sary maro samihafa, ka ny sary samihafa dia voangona tsikelikely rehefa ampiana. Samy voatanisa eto ny sary roa napetrak'izy ireo ary novonjena tamin'ny alalan'ny mpampiasa.
Ny dingan'ny sary miafina avy amin'io sakana io dia fitsipika ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa ary tsy afaka miteraka olana lehibe.
Mankanesa any amin'ny fizarana "Ny pejy" amin'ny alalàn'ny main menu.
Mitadiava sakana iray manokana miaraka amin'ny sary eo amin'ny pejinao manokana.
Ny isa amin'ireo sary mifanandrify amina sakana dia tsy afaka mihoatra ny efatra.
Mialà eo amin'ny sary mila afenina.
Ankehitriny ianao dia mila manindry ny sary miafina, izay niseho tamin'ny zoro havanana amin'ny sary miaraka amin'ny tooltip "Afeno".
Rehefa avy mikitika ny raki-tsoratra voatonona, ny sary manaraka ny voafafa dia hanova ny toerana.
Ilaina ny mandinika ny soso-kevitra izay miseho eo ambonin'ny sary avoakany. Eto no ahafahanao mamerina mamerina ilay sary vao nofafana avy amin'ity karazan-tsakafo ity amin'ny fipihana ny rohy. "Cancel".
Raha nesorina tao amin'ny kasety ny sary rehetra na noho ny famindrana azy ho an'ny rakitsary manokana miaraka amin'ny zon'ireo fidirana voafetra, dia hiova kely io sakana io.
Rehefa vita ny fanatanterahana rehetra, dia azo heverina ho feno ny fialonana. Mariho fa azo atao ny manaisotra ireo sary avy amin'ity horonantsary ity amin'ny alalan'ny tànana, izany hoe ho an'ireny tanjona ireny dia tsy misy fitohanana na fampiharana azo itokisana.
Afeno ny sary miaraka amin'ny marika
Matetika dia mitranga ny namanao na ny namanao iray taminao na tsia amin'ny sary na sary tsy fantatrao. Amin'ity tranga ity, azo atao ny mampiasa sehatra manokana amin'ny sehatra sosialy. VKontakte tambajotra.
Ao anatin'ny dingan'ny sary miafina, izay misy anao marihina, ny hetsika rehetra dia miseho amin'ny alàlan'ny pejy. Noho izany, aorian'ny fanatanterahana ireo toro-hevitra dia hoesorina tanteraka ireo sary rehetra nosoniavinao.
Sokafy ny sariohatry ny VC, amin'ny fipihana ny sarinao manokana ao amin'ny pejy ambony eo amin'ny ilany havia.
Amin'ny alàlan'ny lisitra misokatra dia mandeha amin'ny fizarana "Settings".
Ankehitriny dia mila mifindra amin'ny sehatra privacy ianao amin'ny alàlan'ny menio fiaramanidina.
Ao amin'ny blaogy "Ny pejy" find the item "Iza no mahita ireo sary izay nanamarika ahy".
Aorian'ilay fanoratana anarana taloha, dia manitatra ny sakafo fanampiny ary mifidiana "Fa izaho".
Ankehitriny, raha misy olona manandrana manisy marika anao amin'ny sary sasany, ny marika enti-milaza aminao ihany no hany hita aminao. Noho izany, ny sary dia azo heverina ho miafina amin'ny vahiny.
Ny fitantanana VKontakte dia ahafahanao mampakatra sarimihetsika tena izy, saingy amin'ny faneriterena vitsy monja amin'ny fanombanana ny taona. Raha misy olon-tsotra namoaka sary tsotra miaraka aminao, ny hany lalana hivoaka eto dia fangatahana manokana hanesorana.
Mitandrema, ny mari-pamantarana manokana momba ny tsiambaratelon'ireo sary marika dia mihatra amin'ny sary rehetra tsy misy fisarahana.
Afeno ny sary ary asio sary
Matetika ny mpampiasa dia miatrika olana rehefa mila afenina rakitsary na sary nalaina tao amin'ilay tranonkala. Amin'io tranga io, ny vahaolana dia mipetraka mivantana eo amin'ny seha-pifaneraserana miaraka amin'ireo rakitra ireo.
Raha mamela sary an-tsoratra na sary maromaro manokana ho anao ho tompon'ny kaonty ianao, dia tsy ho hita ao anaty stream miaraka amin'ny sary eo amin'ny pejy manokana ianao.
Raha mila mametraka tarehimarika manokana momba ny fiainana manokana ianao, sary vitsivitsy monja dia tsy maintsy ataonao daholo ny zava-drehetra.
Mankanesa any amin'ny fizarana "Sary" amin'ny alalàn'ny main menu.
Raha hanafina rakikira misy sary ianao, dia ampidino ny cursor avy eo.
Tsy afaka manova ny rakitra momba ny fiainana manokana amin'ny rakikira "Sary eo amin'ny rindriko".
Ao amin'ny zoro havanana ambony, tsindrio ny sary miaraka amin'ny tooltip. "Manitsy Album".
Ao amin'ny fikandran'ny raki-peo voafantina, azonao atao ny manamboatra tranokala.
Eto ianao dia afaka manafina ity ordinatera ity miaraka amin'ny sary avy amin'ny mpampiasa rehetra na mamela ny fidirana afa-tsy amin'ny namana.
Taorian 'ny fametrahana ny votoatin'ny fiainana manokan'ny fiainana manokana, hanamafy ny fanakatonana ny kitiho an-tsoratra "Mahaiza miova".
Ny votoatin'ny tsiambaratelo noforonina ho an'ny rakikiran'ny sary, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia tsy mitaky fanamarinana. Raha mbola tadiavinao tsara ny fanovana dia azonao atao ihany ny mahita ny sary miafina, azonao atao ny mangataka namana mba hijery ny pejinao ary azonao antoka fa miafina amin'ny tarehiny ny sary misy sary.
Amin'ny alàlan'ny default, ny rakitra dia tsy miankina. "Photos saved".
Hatreto, ny fitantanana ny VKontakte dia tsy manome fahafahana hanafenana sary iray. Noho izany, mba hanafenana sary misaraka, mila mamorona rakikira vaovao ianao miaraka amin'ny sehatra manokana momba ny tsiambaratelo ary mamindra ilay rakitra.
Mikarakara ny angon-drakitrao manokana ary maniry hahazo vintana tsara!